सार्वजनिक भयो श्रीपेच, अब सर्वसाधरणले पनि हेर्न पाउने
काठमाडौं । पूर्व राजाहरुले लगाउने श्रीपेच अब सर्वसाधारणले पनि हेर्न पाउने भएका छन् । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा रहेको श्रीपेचलाई सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो । संग्रालयमा आयोजित विशेष समारोहबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा..
३८ क्वीन्टल सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त दुबईमा पक्राउ, गोरेका भाई रमेशलाई पनि ल्याइँदै
काठमाडौँ । ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या मुद्दाका एक मुख्य अभियुक्त बेनु श्रेष्ठलाई नेपाल प्रहरीले संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट पक्रेर नेपाल ल्याएको छ । श्रेष्ठलाई आइतबार नेपाल ल्याइएको नयाँ..
लोकसेवा आयोगलार्इ दुई महिना विज्ञापन नखोल्न सरकारको निर्देशन
काठमाडौं । सरकारले लोकसेवा आयोगलाई दुई महिनाका लागि विज्ञापन नखोल्न लोकसेवा आगोलाई निर्देशन दिएको छ । आइतबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगलाई यस्तो निर्देशन दिएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए..
टोखा नगरपालिकाका अधिकृत १ लाख घुससहित पक्राउ
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले काठमाडौंको टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई घुससहित पक्राउ गरेको छ । अधिकृत कृष्णप्रसाद सुवेदी १ लाख रुपैयाँ घुस रकमसहित कार्यालयबाटै पक्राउ परेका हुन् । आयोगका..
घूस रकम लिँदै गर्दा इन्सपेक्टरसहित २ प्रहरी पक्राउ
काठमाडौं । सेवाग्राहीसँग घूस लिँदै गर्दा नेपाल प्रहरीका इन्सपेक्टरसहित एक जवान पक्राउ परेका छन्। ईलाका प्रहरी कार्यालय बावियाचौरमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक सुशोभन श्रेष्ठ र प्रहरी जवान तिलक लामिछानेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान..
किम जोङ–उनका डुप्लिकेटहरूले दिनकै १५ लाख रुपैयाँ कमाइ गर्छन
काठमाडौं । किम जोङ–उन सन् २०१८ मा हेडलाइनहरूमा छाएका छन् । कहिले उनी आणविक युद्धको धम्की दिइरहेका भेटिन्छन् र डोनल्ड ट्रम्पसँग शाब्दिक लडाईं लड्न व्यस्त हुन्छन् भने कहिले उनी शान्ति..
कान्तिपुर तथा नागरिकका पूर्वअध्यक्ष ज्ञवालीको निधन
काठमाडौं । नेपाल रिपब्लिक मिडिया तथा कान्तिपुर प्रकाशनका पूर्वअध्यक्ष हेमराज ज्ञवालीको शनिबार साँझ निधन भएको छ। उनी ७९ वर्षका थिए। रिपब्लिक मिडियाको अनलाइन संस्करण 'नागरिक न्यूज डटकम' का अनुसार ज्ञवालीको गंगालाल..
कांग्रेस नेता चक्रप्रसाद बास्तोलाको निधन
काठमाडौं । लामो समयदेखि अस्वस्थ्य रहँदै आएका नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री चक्रप्रसाद बास्तोलाको निधन भएको छ। ललितपुरको खुमलटारस्थित आफ्नै निवासमा शनिबार राति ९:२० बजे नेता बास्तोलाको निधन भएको उनका निजी..
सानफ्रान्सिस्को । विश्वकै सबैभन्दा चर्चित सामाजिक सञ्जाल कम्पनी फेसबुकले आफ्ना करिब २ करोड ९० लाख प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरणमा ह्याकरको पहुँच रहेको जनाएको छ । फेसबुकले यसअघि साइबर आक्रमणका कारण ५ करोड..
काठमाडौं । भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका २, कुदाककाउलेको ताबुमा रहेको करिब सवा दुई करोड बराबरको रुद्राक्ष एक अज्ञात समुहले लुटेर लगेका छन् । उक्त रुद्राक्षको बगानलाई एकवर्ष अघि षडानन्द नगरपालिका ३, खार्तम्छाका..
जापानको पासपोर्ट विश्वमै सबैभन्दा शक्तिशाली
एजेन्सी । सिङ्गापरलाई उछिन्दै जापान विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली पासपोर्स हुने देश बनेको छ । आवासिय तथा नागरिकतासम्बन्धी परामर्श दिने कम्पनी हेल्ने एण्ड पार्टर्सले मङ्गलवार सार्वजनिक गरेको ‘हेन्ले पासपोर्ट इन्डेक्स २०१८’..
कस्तो छ श्रीपेच ? शाहवंशको विराशत अब संग्राहालयमा हेर्न पाईने
काठमाडौं। शाहवंशको विरासतका रूपमा रहेको श्रीपेच आउँदो सोमबारबाट सर्वसाधारणले हेर्न पाउने भएका छन् । नारायणहिटी दरवार सङ्ग्रहालय पुग्ने अवलोकनकर्ताहरूले सुर्खेत र रुपन्देही कक्षमा श्रीपेच देख्न पाउने छन् । पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण..
गुर्जा हिमालमा हिमपहिरो : आठ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । गुर्जा हिमाल आरोहरणमा गएको टोली हिमपहिरोमा परेको छ । पाँचजना कोरियन र चारजना नेपालीसहितको नौ जनाको टोली हिमपहिरोमा परेको हो । सात हजार १९३ मिटर उचाईको गुर्जा हिमाल आरोहणमा..
माधव नेपालको प्रश्न : कमिशनका लागि नागिडाँडामा विमानस्थल किन बनाउने ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले मन्त्री र प्रशासकीय प्रमुखलाई आउने कमिशनकै लागि जथाभावी पूर्वाधार बनाउन नहुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढ..
नेपालका प्रमुख शक्तिपीठहरू कुन कुन होलान् ?
काठमाडौं । हिन्दूहरूको महान् पर्व बडादशैंमा घटस्थापनाको दिनदेखि नै विभिन्न शक्तिपीठमा पूजाअर्चना गरिन्छ । यी पीठहरूमा पूजाअर्चना गर्नुको पछाडि अनेकौं धार्मिक विश्वास एवम् किंवदन्ति जोडिएका छन् । दशैंमा विशेषगरी महाकाली, महालक्ष्मी,..
दशैंको मुखमा घुस लिएको आरोपमा समातिए २० कर्मचारी
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिएको आरोपमा धमाधम कर्मचारी समात्न थालेको छ । कास्कीबाट गत बुधबार सरकारी वकिललाई पाँच लाख घुससहित पक्राउ गर्यो । बिहीबार जिल्ला शिक्षा अधिकारी..
विश्व बैंकले तेइस अर्ब सहुलियत ऋण दिने
काठमाडौँ । विश्व बैंकले नेपाललाई वित्तीय तथा ऊर्जा क्षेत्र सुधार नीति कार्यान्वयन गर्न करीब रु २३ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको इन्डोनेसियाको..
अमेरिका र चीनलाई व्यापारयुद्ध रोक्न आईएमएफको चेतावनी
एजेन्सी । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले इन्डोनेसियाको बालीका चलिरहेको एक महत्त्वपूर्ण बैठकमा अमेरिका र चीनलाई विश्व व्यापार संगठनको नियमअनुसार व्यापार गर्न सल्लाह दिएका छन् । यी..
सरकारकै मिलेमतोमा चिनीमा ठूलो चलखेल भएको भन्दै अख्तियारलाई छानविन गर्न निर्देशन
काठमाडौं । चिनीमा ठूलो चलखेल भएको भन्दै अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगललाई छानबिन गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ । चिनीमाथिको चलखेल अध्ययन गर्न लेखा समितिद्वारा गठन गरिएको छानबिन समितिले..
काठमाडौं । सरकारले यौनजन्य अश्लील सामग्री राख्ने २१ हजारभन्दा बढी वेबसाइट बन्द गरेको छ । सरकारले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनालाई कम गर्ने उद्देश्यले अश्लिल वेबसाइट बन्द गर्ने निणर्य गरेको हो..
काठमाडौं ७ बाट वामदेवले हार्ने गरी चुनाव हुँदैनः प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले काठमाडौं क्षेत्र नं ७ बाट वामदेव गौतमलाई उठाउने निर्णय पार्टीले नगरेको बताएका छन् । वामदेवका लागि सांसद रामवीर मानन्धरले राजीनामा दिने कुरा चलेको तर पार्टीले कुनै..
वामदेवको खर्चिलो रहर: एक निर्वाचन क्षेत्रमा राज्यको ढुकुटीबाट ११ करोड खर्च
काठमाडौं । नेकपाका नेता बामदेव गौतमको कारण राज्यको ढुकुटीबाट ११ करोड रुपैयाँ सकिने भएको छ । तपाई हामीले हरेक समय तिरेको करको रकमबाट सो खर्च हुन्छ । ११ करोड रुपैयाँ नेपालजस्तो..
श्रीमतीको मृत्युपछि छोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा बाबु पक्राउ
रोल्पा । रोल्पाकी एक १४ वर्षीया बालिका आफ्नै बाबुबाट बलात्कृत भएकी छन् । रोल्पा नगरपालिका–६ की ती बालिका आफ्नै बाबुबाट पटक–पटक बलात्कार भएको खुलेको हो । गत भदौ २७ गतेदेखि..
ग्वाटेमालाकी पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई साढे १५ वर्षको जेल सजाय, भ्रष्टाचारी ठहर
काठमाडौं । ग्वाटेमालाको एक अदालतले पूर्व उपराष्ट्रपति रोक्साना बाल्डेटीलाई जादूयी पानी भ्रष्टाचार काण्डमा भूमिकाका कारण साढे १५ वर्षको कारावास सजाय दिइएको छ । उनले एउटा ताल सफा गर्नका लागि राज्यकोषमा छुट्ट्याइएका..
नेपालको सार्वजनिक ऋण दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम
काठमाडौं । कूल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलनामा देशको सार्वजनिक ऋण नेपालको दक्षिण एसियामा सबैभन्दा न्यून रहेको छ। पछिल्लो छ महिनाको आर्थिक विश्लेषण गर्दै विश्व बै‌ंकले नेपालको सबैभन्दा न्यून ऋण रहेको उल्लेख..
रामवीरको राजीनामा र वामदेवको उम्मेदवारी अनिष्टको संकेतः बाबुराम
काठमाडौं । नयाँशक्ति पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले बर्दियाबाट पराजित नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ बाट चुनाव लडाउनु चरम राजनीतिक अनिष्टको संकेत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।..
ट्रायल फेललाई लाइसेन्स दिएको अभियोगमा कार्यालय प्रमुखसहित १० जनालाई मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ट्रायल फेल भएका २ सय ४ जनालाई लाइसेन्स दिएको अभियोगमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय, एकान्तकुनाका प्रमुख तेजनारायण यादवसहित १० जनाविरूद्ध मुद्दा..
निक्षेपकर्ताको ४ करोड ठगी गर्ने अजय महर्जन पक्राउ
काठमाडौं । साईनिङ्ग स्टार सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको निक्षेप रकम हिनामिना गरेर आफ्नो नाममा घर–घडेरी खरिद गर्ने अजय महर्जन पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं–१३ ताहाचल बस्ने महर्जनलाई सोमबार..
५ वर्षभित्रै सुकुम्बासी समस्या समाधान हुने भूमिमन्त्रीको दावी
काठमाडौं। सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास भएका वस्तीलाई ५ वर्षभित्र व्यवस्थित गर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले बताएकी छन्। मंगलबार ललितपुर मालपोत कार्यलयमा सरलीकृत गरिएको फारम र..
स्टकहोम । अमेरिकी विश्वविद्यालयका दुईजना अनुसन्धातालाई सन् २०१८ को अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार संयुक्तरुपमा प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ । अमेरिकाको सुप्रसिद्ध येले विश्वविद्यालयका विलियम नोर्धाउसलाई जलवायू परिवर्तनलाई दिर्घकालीन समष्टीगत अर्थशास्त्रमा एकीकरण..
Results 1994: You are at page 24 of 67